Barlamaanka oo meelmariyay in ajaanib shaqo la siin karo - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Barlamaanka oo meelmariyay in ajaanib shaqo la siin karo
Barlamaanka ayaa ansixiyay xeer ogolaanaya in ajnabi maamuli karo bangiga dhexe ee Somaliya xilli booskaa uu qaban karo shaqsi Somali ah. Shaqo la’aan baahsan ayaa jirta waxaad is weydiin Kartaa waxa waqti loogu lumiyay in ajnabi loo bedelo sharciga bangiga ayuu yiri xildhibaan jsagu diidey.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa meel mariyay xeerka Maamulka Bangiga Dhexe oo wax ka bedel lagu sameeyay, 158 Xildhibaan ayaa ogolaatay, halka 17 ay diiday.
Wax ka bedelka xeerka Bangiga Dhexe gaar ahaan lambarkiisa 130aad ayaa ka dhigan in Bangiga Dhexe uu madax ka noqon karo shaqsi ajnabi ah, kuna imaan doona xeer loo cuskanayo xulida Guddiga Agaasinka Bangiga Dhexe.
Maaha sharci dan u ah dalka waxase muuqata in aduunka la tusayo in iyagu lacagta inoo maamulaan. Fadhi dhan oo barlamaan qaran oo loo fadhiistey in nin gaala kana soo jeeda dalkii Somali halkaa dhigey in waqti lagu lumiyo waxay noqonaysaa arin aad u foolxun oo lagu xasuusan karo madaxda dalka